Umgangatho wokujonga ulwandle ngeSanya eyothusayo amagumbi amabini / imizuzu emi-5 uhamba ukuya elunxwemeni - I-Airbnb
Umgangatho wokujonga ulwandle ngeSanya eyothusayo amagumbi amabini / imizuzu emi-5 uhamba ukuya elunxwemeni
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu海棠长滩海景度假公寓
U海棠长滩海景度假公寓 unezimvo eziyi-44 zezinye iindawo.
I-Qingfeng Haitang Long Beach Seaview Holiday Apartment ikwindawo ephumayo yaseTufu kumgca osempuma womjikelezo ojikelezayo.Kuthatha iimitha ezingama-400 ukuhla kwindlela yeenqwelomoya kwaye inonxweme oluyikhilomitha enye.Uluntu lonke luneendlela ezintathu zokungena neziphumayo. Olu luntu luluntu olukwinqanaba eliphezulu, lunembeko, lucocekile, luzolile, iiteksi ezijikelezayo, kunye nohambo lweDidi, olulula kakhulu.
Indlu yonke inamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elinye.Indlu inezixhobo ezipheleleyo kunye nezindlu zangasese, amagumbi axhotyiswe ngecoffee table, air conditioner, fridge, TV, electric water heater, electric heater, ketile, wireless WIFI, washing machine, balcony ene. umbono, izibonelelo zekhitshi kunye nezixhobo. Kukho iintlobo ngeentlobo zezixhobo ezifanelekileyo kumgama wokuhamba, ezinje ngeevenkile ezilula, iivenkile ezinkulu, iimarike zemifuno, kunye neendawo zokutyela ezahlukeneyo zokutyela kunye nokutyelela iindawo ezikufutshane.
Ndalala cwaka ebhedini yokuphulaphula efudumeleyo elikhulu isandi ngokuvuthuza amagqabi, nedama lokuqubha kwintendelezo. Abantu eziphezu ahlanjwe ilanga efudumeleyo, kwaye uhle abantu abadala bedlala nabantwana, yaye yintoni ozibonayo ubuhle . Imizobo ejingayo efudumeleyo, iintyatyambo ezikhethekileyo zikaHu ezomisiweyo, kunye neevazi ezenziwe ngesandla ngobugcisa zikaHu zizisa imvakalelo eyodwa yoyilo kwigumbi elilula nelihle.Igumbi lokuhlala eliphangaleleyo neliqaqambileyo lonwabela iTV enescreen esikhulu, iWi-Fi ekhawulezayo, umoya opholileyo, kunye lokulala omnandi uziva ecocekileyo. le zokwandlala, izibonelelo lokuhlambela ezikumgangatho ophezulu (iiyure ezingama-24 zamanzi ashushu, zokuhlamba), unako ukubonisa ikhono lakho upheka ekhishini enkulu kitchenware epheleleyo, nihlambe iingubo zenu kwi kumatshini wokuhlamba uze koma zinuka kamnandi elangeni. Nali elinye ikhaya lohambo lwakho ukuba uneminye imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuthetha nam. Ndiza kukunika iingcebiso zohambo kwaye ndiza kuzama ngako konke okusemandleni am ukuhlangabezana neemfuno zakho ngexesha lokuhlala kwakho.
Indlu yonke igubungela indawo ye-75 square metres, amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala elinye, ikhitshi kunye nebalcony enye. Inezixhobo ezipheleleyo. Ndiyakholelwa ukuba uya kulala kamnandi ebusuku! moya, lezambatho, TV, ezamahala 100m wifi, kunye lokuhlambela Ndahluleleni (iiyure ezingama-24 zamanzi ashushu ilungele)! ukuba ufuna ukupheka, ikhitshi lixhotyiswe zonke izinto zasekhitshini, uze ubonise ikhono lakho ukupheka
Izixhobo ezijikelezileyo: iivenkile ezinkulu, iibhanki, iimarike zamafama, ukwenza uhambo kunye nokuthenga kube lula kwaye kukhululekile kuwe. Ingaphakathi loluntu linomtsalane, linevumba elimnandi leentaka neentyatyambo, nemithi eluhlaza, kwaye izakhiwo ezihonjiswe ngezibane ze-neon ebusuku zinomtsalane ngakumbi kwaye aziqhelekanga; uluntu lunezixhobo ezixhasa ngokupheleleyo: amadama okuqubha, izixhobo zokuzilolonga, ukonwatyiswa kwabantwana. izibonelelo, kunye nezakhiwo ezincinane. iivenkile, iivenkile iziqhamo, iimveliso zaselwandle kunye zokutyela gourmet, yonke into aya kukwenza uzive ngathi yiparadesi. Ingaphakathi legumbi lihonjiswe ngokugqwesileyo, licocekile lixhotyiswe ngokucoca okukhethekileyo, licocekile kwaye likhululekile, indawo yokuqubha yeemitha ezili-10,000, iindawo zokuzonwabisa zabantu abadala, indawo yokudlala yabantwana, ukwakhiwa kweendawo zokusebenza kunye nokuthathela ingqalelo ngenyameko imeko yendawo yeholide. ityebile kwaye inemibala. Ukubonelela abanini ngeentlobo ngeentlobo zeenkonzo zenkonzo yeholide Kumgangatho wokuqala kwamanye amagumbi okujonga ulwandle kwiprojekthi, kukho indawo zemisebenzi yabaninizo, kubandakanywa iijimnasiums, ichess kunye namagumbi amakhadi, iibhari zeencwadi, iivenkile zekofu kunye neminye imisebenzi yangaphakathi. iindawo, kunye neenkonzo zokhuseleko iiyure ezingama-24.
Umbuki zindwendwe ngu- 海棠长滩海景度假公寓
Iiyure ezingama-24 kwinkonzo yakho
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sanya